Nordic Books - Ikkaro को संस्करणमा Cafafis द्वारा कवि इथाका
मुख्य पृष्ठ >> किताबहरु >> Cavafis को Ithaca
मलाई लाग्छ कि सबैले थाहा पाउनेछन् कन्स्टान्टिनो काभाफिस, २० औं शताब्दीको ग्रीक कवि, अलेक्जान्ड्रिया (इजिप्ट) मा जन्म। हालसालका सब भन्दा महत्वपूर्ण ग्रीक कवि मानिन्छ। आफ्नो प्रसिद्ध कविता गर्न इथाका, अन्य कार्यहरू जस्तै थपिएका छन् बर्बरहरूका लागि कुर्दै o ईन्टोनियोलाई परमेश्वरले त्याग्नुभयो.
तपाईं कविता सबै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं यसलाई पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, म यसलाई अन्तमा तपाईंको लागि छोडिदिन्छु। तर के वास्तवमा यस मामला मा मजा छ सम्पादन छ। यो एक कविता को verses 36 पदहरु लाई समर्पित सम्पूर्ण पुस्तक हो।
आश्चर्यचकित छ कि मसँग यो केहि दिनहरूमा, म यसलाई मजा लिन र पुनः पढ्न लगभग दैनिक लिन्छु। र त्यो भावना, त्यो खुशी, डिजिटल मा प्राप्त छैन। यदि तपाइँ मनपराउन सक्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ यहाँ किन्नुहोस्
यो कविता पहिले नै राम्रोसँग अध्ययन गरिएको छ र अत्यधिक विश्लेषण गरिएको छ, तपाईं सही विश्लेषण खोज्न सक्नुहुनेछ यदि यो तपाईं पर्खदै हुनुहुन्छ भने। के म यहाँ छोड्दछु मेरा प्रभावहरू हुन् जुन म कविताको रूपमा परिमार्जन गर्दछु, पुन: पठन र जीवनमा मेरो अनुभवको आधारमा, मलाई नयाँ अर्थहरू सुझाव दिन्छ।
उसले मलाई दिने सल्लाह हो। जीवनको फाइदा लिनुहोस्, सडकको फाइदा लिनुहोस् तपाईले गर्नुहुने सबै कुरामा, तपाईको लक्ष्यमा, किनकि वास्तवमा के महत्त्वपूर्ण हुन्छ र तपाईले अनुभवलाई समृद्ध तुल्याउनेछ, तपाईको यात्रामा वा तपाईको लक्ष्यमा पुग्न कठिनाईहरू हो गन्तव्य होइन। आफैमा।
त्यसकारण उसले हामीलाई हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो लक्ष्यहरू, हाम्रो इटाकाससम्म पुग्न र पत्ता लगाउन, रमाउन, बाँच्न र हामीले सकेजति सबै कुरा सिक्न हतार नगर्न प्रोत्साहन गर्छ। यात्रा विस्तार गर्न र अनुभव बृद्धि गर्नका लागि।
यो कविता पढेर फेरि पढ्न पाउनु साँच्चै आनन्दको कुरा हो।
यदि तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभयो यहाँ कविता खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईसंग यो छ.Poem इथाका सी.पी. काभाफिसद्वारा (भिसेन्टे फर्नांडीज गोन्जालेज द्वारा अनुवाद गरिएको)
जब तपाईं इथाकाको लागि आफ्नो यात्रामा जानुहुन्छ,
सोध्नुहोस् कि तपाईंको बाटो लामो छ,
साहसिक पूरा, ज्ञानले भरिएको।
ल्यास्ट्रिगियन्स र साइक्लपहरूमा।
क्रोधित पोसेडोनसँग नडरा,
ती तिम्रा मार्गहरू कहिल्यै पार गर्दैनन्।
यदि तपाईंको सोच उच्च छ, एक भावना हो भने
तपाईंको आत्मा र तपाईंको शरीर गुँडमा नाजुक।
न त ल्यास्ट्रिगियन्स हो न साइक्लपहरू
न त कडा पोसीडोन तपाईंले पाउनुहुनेछ,
यदि तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो प्राण भित्र लैजानु हुँदैन भने,
यदि तपाईंको आत्माले तिनीहरूलाई तपाईंको पथमा उचाल्दैन भने।
र धेरै गर्मी बिहान
कुनमा - कस्तो खुशी संग, कुन खुशी संग-
तपाईले बन्दरगाहमा प्रवेश कहिल्यै देखेका छैनन्;
फोनिसियन एम्पोरियमहरूमा रोक्नुहोस्,
र आफ्नो बहुमूल्य व्यापार,
मोतीको आमा - मोती र कोरल, एम्बर र आबनूस,
र सबै प्रकारका कामुक सुगन्धहरू,
अधिक कामुक सुगन्ध तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ;
धेरै मिश्री शहरहरूमा उसले देख्छ,
जान्न र सिक्नेहरूबाट सिक्न।
सधैं इटाकालाई दिमागमा राख्नुहोस्।
त्यहाँ पुग्नु तपाईंको गन्तव्य हो।
तर यात्रामा कुनै हडबडी बिना।
यो धेरै वर्षसम्म रहनु राम्रो हो;
र बुढेसकालमा तपाईं टापुमा अवतरण गर्नुभयो,
बाटोमा कमाएको सबै सम्पत्तीको साथ,
इथाका तपाइँलाई समृद्ध बनाउन को लागी पर्खाइ बिना।
Ithaca तपाईंलाई शानदार यात्रा दिनुभयो।
यो बिना तपाईं बाहिर सेट छैन।
उहाँ अब तपाईंलाई अरू केहि प्रदान गर्न सक्नुहुन्न।
र यदि तपाईंले उनलाई गरिब भेट्टाउनुभयो भने, इथकाले तपाईंलाई धोका दिएन।
तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको बुद्धिको साथ, आफ्नो अनुभवको साथ,
तपाईंले पहिल्यै बुझ्नुहुनेछ इताकासको मतलब के हो।
रोचक जानकारी, उपकरण र संसाधनहरू लेखक र उसको कामको ज्ञानलाई गहन बनाउन
Cafafis आधिकारिक संग्रह (अंग्रेजीमा)
1 इथाकाको अर्थ